သင္တန္း | FRD
Advanced Excel သင်တန်း
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ် (World Bank) အကူအညီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာ၌
ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များထိရောက် အဆင်ပြေနိုင်စေနိုင်ရေးအတွက် ဌာနဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် MCC INSTITUTE(နေပြည်တော်) တွင် ၂၇-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၄-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်သည့်
Advanced Excel သင်တန်းသို့ ဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းစုစုပေါင်း (၆၂)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Mr. Vikram Kumar, Country Manager from International Finance Corporation (IFC) provided
the “Training on Analysis of MFIs” on 6th September 2018 at office No.34, Nay Pyi Taw.
Director General of FRD gave the opening remarks at the opening ceremony of the training and
30 staffs from Head Office of Financial Regulatory Department (FRD) joined this training.
IFC Training on Analysis of MFIs သင်တန်း
International Finance Corporation ( IFC ) မှ Country Manager ဖြစ်သူ
Mr.Vikram Kumar က Analysis of MFIs နှင့်စပ်လျဉ်း၍သင်တန်းအား ၆-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ တွင်
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်တွင် သင်တန်း ပို့ချခဲ့ရာ
သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး
၁။	အာမခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းသည် အာမခံ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ တိုးတက်ရေးနှင့် အာမခံဝန်ဆောင်မှု ကောင်းသတင်း အပေါ်များစွာ အကျိုး သက်ရောက်စေပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အာမခံ ကိုယ်စားလှယ်များ စနစ်တကျ ခန့်အပ်နိုင်ရေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားရေးတို့အတွက်အာမခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် အာမခံကိုယ်စားလှယ် များ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်လိုက်သည်။
အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ အခန်း(၅)၊ပုဒ်မ(၈) အရ အာမခံလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ထက်ပို၍ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်လိုသော ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်။
NATIONAL BANK OF CAMBODIA နှင့် ACLEDA TRAINING CENTER